Global Voices teny Malagasy » Pakistana Taitran’ny Fanafihana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Oktobra 2007 16:16 GMT 1	 · Mpanoratra Omer Alvie Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsimo, Pakistana, Fifidianana, Politika
Nanan-kambara avy hatrany tokoa ny tontolon’ny bilaogy karana raha vao nitranga iny fanafihan’ny mpampihorohoro iny. All Things Pakistan dia naneho ny fihetsika fanao amin’ny zava-mitranga  toy ireny; fehezin’I Pakistani Spectator [Mpijery Karana] kosa fa hiteraka fanohanana betsaka ho an’ny PPP iny fanafihana iny; ary mitantara ny fandehan’ny tantara sy ny setriny nataon’ny olona tamin’io fanafihana io. Mitantara ny zava-nisy manodidina ny fanafihana sy ny fihetsika hita  tamin'izany koa i Ali Eteraz.
Tao anaty hatezerana no namali an’I Tears of the moon[Ranomasom-bolana], ny zavamisy politika ao Pakistana,
Voalohany, mahafantatra avokoa isika rehetra fa notahiana manana ireo mpitarika mahatsapa adidy…Mpitarika ? Aleo aloha ahitsy ny fehezanteny…Notahiana isika amin’ireto mpanao politika manetry tena hitondra antsika ao amin’ny fahatsaram-pony, Mitalapetraka tsara tahaka ny vatasarihana anaty fefy volamena maharo tsara amin’ny bala fitorahana. Mila ‘awam’[sarambambem-bahoaka ?] ry zareo rehefa mijoro aorian’ny andiam-bahoaka avy amin’ny awam mba hiarovana azy ireo amin’ny awam. Oxymoron  [izany hoe teny mifanohitra ampiarahina tahaka ny teny hoe mamy-masira ve ity] moa ? ilay teny ihany izany, Moron  [Psykolojia avy amin’ny teny grika moros: fahadalana] ihany dia efa ampy eto !
Mitana ny Ben’ny tanànan’i Karachi noho ny tsy fahatomombanan’ny fiarovana  kosa i Zindagi, raha manana fijery manohana ny fahatongavan’i Benazir miverina an-tanindrazana kosa i the Glasshouse ary nametrapetraka tsara ny resaka  amin’ity toe-draharaha ity :
Desicritcs kosa manambara trangan-javatra vitsivitsy milaza izay mety ho tompon’antoka  amin’ny fanafihana. Araka izay hita ao amin’ny Counterterrorism blog . Ary farany, Beyond the Punchline kosa mametraka fa noho ny kiribibin’i Benazir ihany no mahatonga ireny toe-javatra ireny hitranga.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2007/10/22/118/
 naneho ny fihetsika fanao amin’ny zava-mitranga: http://pakistaniat.com/2007/10/18/more-than-100-deadand-benazir-returns/
 hiteraka fanohanana betsaka ho an’ny PPP : http://pakspectator.blogspot.com/2007/10/gathering-masses-in-any-developing.html/
 ny fanafihana sy ny fihetsika hita: http://eteraz.wordpress.com/2007/10/18/suicide-bomb-attacks-benazir-bhuttos-caravan-in-karachi/
 hatezerana no namali: http://simplystuck.wordpress.com/2007/10/19/we-the-people/
 Ben’ny tanànan’i Karachi noho ny tsy fahatomombanan’ny fiarovana: http://mama20.wordpress.com/2007/10/18/karachi-yet-againhats-off-to-mustufa-kamal/
 nametrapetraka tsara ny resaka: http://politicalpakistan.blogspot.com/2007/10/here-is-hoping.html
 trangan-javatra vitsivitsy milaza izay mety ho tompon’antoka: http://desicritics.org/2007/10/18/220701.php
 Counterterrorism blog: http://counterterrorismblog.org/2007/10/bhutto_bomb_attack.php
 noho ny kiribibin’i Benazir ihany : http://beyondthepunchline.blogspot.com/2007/10/bomb-attack-ruins-bhutto-homecoming.html